Maka: ukukhanya | Martech Zone
Esi sisithuba esifutshane kwaye simnandi kwimicimbi ye-caching. IiSayithi kunye neibrawuza zakhelwe ukuphucula izixhobo. Benza kakuhle ngamanye amaxesha kangangokuba umphumo wokugqibela uyaphula iwebhusayithi yakho enamandla endaweni yokuyihlaziya rhoqo ngendlela othanda ngayo. Namhlanje bendisebenza noMdlali weJW, umdlali weFlash Movie odonsa kuluhlu lweemovie ngefayile yeXML. Ingxaki kukuba sihlala sihlaziya ifayile nge